Mihaino ireo mpamorona rindrambaiko - Inona no fampahalalana ilainao hitantana ny vatohara? | Hanan-dranomasina
Mihaino ireo mpamorona rindrambaiko - Inona no fampahalalana ilainao hitantana ny vatohara?
Oct 17, 2019 | Vaovao
Makà misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFanadihadiana X-XX minitra hamantarana ny angona ilainao mba handraisana fanapahan-kevitra momba ny fitantanana vatohara. Ampiasaina hanatsarana ny takelaka fampahalalam-baovao amboarina ho an'ny tompon'orinasa misy anao ny fampidiranao.
Ny World Resource Institute, The Nature Conservancy, National Geographic Society, ary Vulcan Inc. dia miara-miasa mba hanombatombana ny filàna data ho an'ny mpihaino marobe, anisan'izany ny mpiandraikitra ny faritra arovana an-dranomasina, ny mpitsara amin'ny fiarovana ny ranomasina, ny manam-pahefana momba ny fiarovana ny morontsiraka, ary ny fiantohana.
Tena ilaina ny fandraisanao anjara mba hahazoana antoka ny sehatry ny data ho avy manana ny vaovao ilainao hitantana ny haran-dranomasina.
Ny fanadihadiana dia miasa tsara amin'ny solosaina finday na tablette, fa miasa koa amin'ny finday marani-tsaina.
Tsy ho hita ampahibemaso ny valintenin'ny tsirairay.
Fantatray fa sarobidy ny fotoananao ary hanampy amin'ny famporisihana ny fandraisana anjara manolotra fakantsary ambanin'ny rano izahay ho an'ny mpandray anjara telo miaraka amin'ny fanadihadiana feno! (Ireo mpandray anjara fakantsary dia hofidiana tampoka eo amin'ny faran'ny fanadihadiana.)
Hikatona ny fanadihadiana Oktobra 28. misokatra amin'ny varavarankely vaovaoRaiso fanadihadiana.